Bible Mu Nsɛm Yehosafat De Ne Ho To Yehowa So - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
WUNIM saa mmarima yi ne nea wɔreyɛ? Wɔrekɔ ɔkõ, na mmarima a wodi anim no reto dwom. Nanso ebia wubebisa sɛ: ‘Dɛn nti na mmarima no nni nkrante ne mpeaw a wɔde bɛko?’ Ma yɛnhwɛ.
Ná Yehosafat ne mmusuakuw abien Israel ahemman no hene. Ɔne Ɔhene Ahab ne Yesebel a na wɔwɔ mmusuakuw 10 kusuufam ahemman no mu no traa ase bere koro mu. Nanso na Yehosafat yɛ ɔhempa, na na n’agya Asa nso yɛ ɔhempa. Enti keseefam mmusuakuw abien ahemman no mufo nyaa ahotɔ mfe pii.
Nanso afei asɛm bi sii a ɛmaa ehu kaa ɔman no. Nkurɔfo bɛka kyerɛɛ Yehosafat sɛ: ‘Dɔm kɛse a wofi Moab, Amon ne Bepɔw Seir so reba wo so.’ Israelfo pii hyiae wɔ Yerusalem a na wɔhwehwɛ Yehowa mmoa. Wɔkɔɔ asɔrefi hɔ, na Yehosafat bɔɔ mpae wɔ hɔ sɛ: ‘O Yehowa yɛn Nyankopɔn, yennim nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Yentumi nyɛ hwee wɔ dɔm kɛse yi anim. Yɛn ani da wo so.’
Yehowa tiei, na ɔmaa ne nkoa mu biako ka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: ‘Ɔko no nyɛ mo de, na mmom Onyankopɔn dea. Ɛho renhia sɛ moko. Mo de monhwɛ ara, na monhwɛ sɛnea Yehowa begye mo.’
Enti ade kyee no Yehosafat ka kyerɛɛ ɔman no sɛ: ‘Momfa mo ho nto Yehowa so!’ Afei ɔmaa dwontofo bedii asraafo no anim, na bere a wɔrekɔ no na wɔreto Yehowa ayeyi dwom. Wunim nea ɛbae bere a wɔbɛn ɔko no ano no? Yehowa maa atamfo no twaa wɔn ho ne wɔn ho koe. Na bere a Israelfo no koduu hɔ no na atamfo asraafo no nyinaa awuwu!
So Yehosafat nyɛ nyansafo sɛ ɔde ne ho too Yehowa so anaa? Sɛ yɛde yɛn ho to No so a, yɛn nso yɛbɛyɛ anyansafo.
1 Ahene 22:41-53; 2 Beresosɛm 20:1-30.
Hena ne Yehosafat, na bere bɛn mu na ɔtraa ase?
Adɛn nti na ehu aka Israelfo no, na dɛn na wɔn mu pii yɛe?
Dɛn mmuae na Yehowa de maa Yehosafat wɔ ne mpaebɔ no ho?
Dɛn na Yehowa ma esii ansa na ɔko no reba so?
Asuade bɛn na yebetumi anya afi Yehosafat hɔ?
Kenkan 2 Beresosɛm 20:1-30.
Ɔkwan bɛn so na Yehosafat kyerɛɛ nea ɛsɛ sɛ Onyankopɔn asomfo anokwafo yɛ bere a wɔahyia tebea a ɛyɛ hu no? (2 Be. 20:12; Dw. 25:15; 62:1)
Esiane sɛ bere nyinaa no Yehowa nam n’ahyehyɛde so na ɔne ne nkurɔfo di nkitaho nti, ahyehyɛde bɛn na ɔde di dwuma nnɛ? (2 Be. 20:14, 15; Mat. 24:45-47; Yoh. 15:15)
Sɛ Onyankopɔn fi “ade nyinaa so tumfoɔ no, da kɛse no mu ko no” ase a, ɔkwan bɛn so na yɛn tebea no bɛyɛ te sɛ Yehosafat de no? (2 Be. 20:15, 17; 32:8; Adi. 16:14, 16)
Kyɛfa bɛn na akwampaefo ne asɛmpatrɛwfo renya wɔ wiase nyinaa asɛnka adwuma no mu nnɛ de suasua Lewifo no? (2 Be. 20:19; Rom. 10:13-15; 2 Tim. 4:2)